Wararka - 2020 waa sanad miro dhal u ah Stamina, sidee nasiib wanaag ah
Waxaan ku dhamaynay mashruucii balaadhnaa ee ka yimid Australia waqtigii loogu talagalay, macmiilkeenu wuxuu qabanayaa shaqadooda golaha hada. Waxay noo bilaabeen mashruuc cusub oo la mid ah annaga oo aan shaki ku jirin dhowr maalmood ka hor, xitaa iyaga kama wada hadlaan wax su'aal farsamo ah, kaliya na tuur sawirada. Sidoo kale waa durbaan, laakiin kala badh silsilad ah, aad uga dheer. Injineeradeenu wali baaritaan qoto dheer ayey ku sameeyaan sawirrada, markay sidan sameeyaan, waxay u baahan yihiin inay iska iloobaan dhammaan mashaariicdi hore, si looga fogaado wixii khalkhal ama khibrad leh. Ka dib markaan ka wada hadalno dhammaan waaxda qaraabada, waxaan go'aansanay inaan ku dhammeyno mashruucan labo bilood gudahood.
Isla mar ahaantaana, alaabtayada kale ee loogu talagalay macaamiisha Jarmalka iyo USA waa la dhammeeyaa oo la raraa waqtigooda, dhammaantood waxay heleen jawaab celin wanaagsan.
Waxsoosaarkayagu wuxuu ka badan yahay 200% kor u kaca ka duwan sanadkii hore, iyada oo aan wax dhibaato ah oo tayo leh haba yaraatee.
Miisaankayagu waa la balaadhiyay talaabo talaabo, wuxuu qortay xoogaa shaqaale iyo farsamoyaqaano ah, wuxuu kiraystay hal aqoon isweydaarsi weyn
Waxaan sidoo kale soo iibsanay mashiin weyn oo lathe ah, dhexroor mashiinka ah ilaa 1200mm, dherer ilaa 6m.
Guushayadu waxay sidoo kale soo jiidatay dareenka dowladda hoose. Dawladda Yantai FTZ ayaa mas'uul ka ah, waaxaha oo dhan waxay leeyihiin waxqabad sare. Waaxyaha qaraabada ayaa dhowr jeer u yimid inay maalgashadaan xaaladdeena, iskuday inay naga caawiyaan sidii aan u heli lahayn horumar badan. Waxaan dareemeynaa mahadnaq aad u badan.
GM Jerry-keena wuxuu kulan la qaatay dhamaan shaqaalaha, wuxuu soo bandhigay xaalada shirkada, wuxuu yiri mahadsanid shaqaala kasta, wuxuu soo jeediyay qorshaheena mustaqbalka, wuxuuna go'aansaday inaan siino faa iidooyin dheeri ah shaqaalaha. Jerry wuxuu soo bandhigayaa hadafka Stamina markale. Stamina waa inay u shaqeysaa sidii shirkad mas'uul ah, mas'uul ka ah deegaanka, mas'uul ka ah bulshada, mas'uul ka ah shaqaalaha.
Hadda waxaan bilaabaynaa maalgashi dhul waxaana dhiseynaa aqoon isweydaarsi u gaar ah.
Rajada Stamina waxay leedahay berri dhalaal badan!